चाँदी चोर्नको लागि यति धेरै लगानी ! सुरुङ बनाउन डेढ करोडमा छेउको घर नै किने – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण १७, २०७७ समय: ०:२९:११
पुलिसका अनुसार यो बस्तीमा डा. सोनीको घरको ठीक पछाडि घर नम्बर डी–१३५ छ। यो घर जनवरी ४ मा बनवारी लाल जांगिड नाम गरेका व्यक्तिले करिब ९० लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेका थिए । यही घरको एउटा खाली कोठाबाट भुइँमा लगभग चार फिट गहिरो सुरुङ खनिएको थियो । चोरले लगभग २० फिट लामो सुरुङ खनेर डाक्टरको बेसमेन्टमा पुगेका थिए । चोरहरूले जमिनमा भएका बाकसहरूमा रहेका चाँदीका गहनाहरू चोरे त्यसपछि माटो हालेर सुरुङ बन्द गरे र भुइँमा टाइलहरू पनि राखिदिए । source-DCNEPAL.COM